गीत लेखनमा छिरे प्रमोद – ABC KHABAR
गीत लेखनमा छिरे प्रमोद
August 7, 2016 August 7, 2016 ABC Khabar अरुणिमा
फुल्छ फुल उ, हाँगाले नै राम्रो
घोच्छ तर पनि, काँडाले नै राम्रो
काठमाडौं, २३ साउन । साहित्य सिर्जनाका युवा साधक हुन प्रमोद स्नेही श्रेष्ठ । उनको सिर्जना बाल्यकालदेखि कै अब्बल रहेको छ । खोटाङग जिल्लाको अर्खौलेमा २०४६ सालमा जन्मेका उनी समाजसेवा समेत उतिकै क्रियाशिल छन् । हाल बालसेवा समाज नेपाल खोटाङसँग आवद्व उनी राजकुमार श्रेष्ठ र आमा ईन्द्रकुमारी श्रेष्ठ कोखमा जन्मेका कान्छा छोरा हुन् ।
स्कुल पढ्दा देखि नै साहित्यमा झुकाव राख्ने उनले १० कक्षामा पढ्दै गर्दा ‘नेपालीका चोटहरु’ कविता संग्रह प्रकाशन गरि सकेकाछन् । यस पछि जिल्लामा हुने विभिन्न साहित्यक कार्यक्रमहरुमा कविता वाचन गर्ने देखि जिल्लाको गजल लेखनको क्षेत्रमा समेत अब्बल रहेका छन् ।
यूवा सर्जकहरुको भिडमा उनको रचना हाल कमै प्रकाशनमा आउने गरेको भएपनि जति सार्वजनिक भए । ती अब्बल नै रहेका छन् । उनको भर्खरै सौर्य दैनिकमा प्रकाशित एक कविताको अंशले उनलाई यो प्रमाणित गर्न सक्छ । उनले कवितामा यसरी उपस्थिती जनाएका छन् ।
सुनेर तिम्रो भजन
भ्रमिक शब्दहरुमा सधैं
ताली ठोकिरहनुपर्छ भन्ने छैन महाराज…!
छेकेर किरण उज्यालोको
दिउँसै रात पारेर
राष्ट्रियतालाई नाङ्गो बनाउदै
अस्तित्वको बलत्कार गरिन्छ भने
तिम्रो असली भक्त बाटै
तिम्रा भ्रमिक शब्दहरुको तोडफोड कसरी हुँदोरहेछ…!
कवितामा आफ्नो उपस्थित जनाइरहेका प्रमोदले भर्खरै एउटा गीत रेकर्ड गराएका छन् । ‘फुल्छ फुल हागाँले नै राम्रो’बोलको गीत उनको पहिलो रेकर्डिङ हुन लागेको गीत हो । गीतको लय र शब्द भावले यो प्रेमिल र चोखोमायामा आधारीत रहेको बुझिन्छ ।
उनले कतिपय कुराहरू आफू सँग नहुँदा अर्थात आफूबाट टाढा छ भने त्यो सारै प्रिय लाग्ने उनको गीतमा रहेको छ । खासगरी गीतमा पेमपुर्ण भावसमेत निकै मिठासपुर्ण तरीकाले उठाइएको छ । यो गीतमा अन्जु पन्तको स्वर रहेको छ । सँगीतकार राजनराज सिवाकोटीको सँगीत रहेको उक्त गीतको एरेन्ज साहाश शाक्यको रहेको छ ।
गीत प्रिज्म स्टुडियोमा रेकर्ड भएको हो । प्रमोदको रचना अनि शब्द मा खै के त्यस्तो जादुछ कुन्नि उनले लेखेका यो गीत निकै राम्रो बनेको छ । उनले गीतमा भनेका छन् ।
आँखाबाट बग्छ समुन्द्र, तर पनि हास्नै पर्ने
मनको घाउ पीडाहरु, सहेर नि बाँच्नै पर्ने
जिन्दगीको पहाड मेरो डाँडाले नै राम्रो
घोच्छ तर पनि काँडाले नै राम्रो